बोर्डिङ्गे माष्टर | www.samakalinsahitya.com
‘कथी भेलौ बौवा !’ (के भयो, बाबु !) त्यत्तिखेरै डेरा मालिक्नीले लेघ्रो पसारिन् ।
‘के हुनु र आमा ! स्कूलमा मरेर काम गर्छु, यहाँ पनि स्कूलकै काम गर्नुपर्छ । गरेको देख्ने कोही होइन । काम पछि माम भेट्नुपर्ने हो तर यहाँ बाँच्नसम्म पाइन्न । भोकै र तिर्खै खटिरहनुपर्छ । यसो केही भन्न खोज्यो कि तलब दिएकै छ नि त भनिन्छ ।’ उनले दुखेसोका साथ स्पष्टीकरण दिए ।
‘ओ तोहोर बात भेलै । महिना लागले हमरा कोठाभाडा ला न !’ (त्यो तिम्रो कुरा भयो । महिना लाग्यो मलाई कोठाभाडा देऊ ।) डेरा मालिक्नीको कर्कस बोली फेरि गुञ्जियो । उनी तर्सिए ।
‘दिन्छु आमा ! दिन्छु । पेट काटेर भए पनि दिन्छु । टिउसन पढाएर भए पनि जोहो गरेको छु । स्कूलले दिएको तलवले मुखमा माड लगाउन त धौधौ हुन्छ । घरभाडा पु¥याउन त उही हो ।’ उनको तर्क सुनेर मालिक्नी गम खान थालिन् ।
‘हँ, हमर पोतों पढैछे । स्कूलों हमरा सभक मारमे पारै छै । तूँ सभ टिउसनके नाम पर हमरा सभक खर्चा बढाबै छी ।’ (हँ, मेरो नाति पनि पढ्छ । स्कूल पनि हामीलाई मारमा पार्छ । तिमीहरू पनि टिउसनको नाममा हाम्रो खर्च बढाउँछौ ।)
‘ए बाबा ! दान मागेको छैन । लुटेको पनि होइन । मानसिक श्रम गरेर दुई पैसा कमाएको त हो नि । बोर्डिङ्गे माष्टर भए पछि तलवकै भरमा बाँच्ने कुरा आएन । टिउसन पनि नपढाए त भाग्नुको विकल्प रहन्न ।’ सुनिल सरले पनि मुखभरिको जवाफ फर्काए ।
आमै चुपचाप मुण्टो हल्लाउँदी भइन् ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : शुक्रबार, 19 आश्वीन, 2069
कवि मातृका पोखरेलको ‘यात्राको एउटा दृष्य’: एक विश्लेषण